November 2019 – Sonic Generation
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့မှာ Motivation Speaker အများစု ပေါ်ထွန်းလာပြီး နာမည်ကျော် လူသိများလာကြပါပြီ။ ဆရာအများစုပြောကြတဲ့ NLP ပညာရပ်ပာာလည်း အတော်လေး ခေတ်စားလာပါတယ်—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
တစ်ခါက လယ်သမားတစ်ယောက်ပာာ ရာသီဥတုမကောင်းတဲ့ ဒဏ်ကြောင့် အသီးအနှံများစွာ အရှုံးပေါ်ရှာတယ်။ ဒါ့အပြင် ငွေတိုးချေးသူထံက ချေးယူထားတဲ့ အတိုးတွေကလည်း များပြားလွန်းတဲ့ အတွက် ပြန်မဆပ်နိုင်လို့ အခက်ကြုံနေရှာတယ်—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
တစ်နေ့တာကို တန်ဖိုးရှိရှိဖြတ်သန်းလိုတဲ့အခါ လုပ်သင့်တဲ့ အချက် ၁၂ချက်
မနက်စောစော အိပ်ရာထပါ။ မနက်စောစော အိပ်ရာထခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်ကို ကြည်လင်စေတဲ့ အပြင် တစ်နေ့တာမှာ ဆောင်ရွက်စရာရှိတာတွေကို ပိုမိုဆောင်ရွက်ဖို့ အချိန်ပို ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ဂျက်မပြောတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အကြောင်း
ဂျက်မဆိုရင် လူတိုင်းသိနေတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ ထွေထွေထူးထူး မိတ်ဆက်နေဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ သာမန်ဘဝကနေ အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးအဖြစ် တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကတော့ အများကြီးပါ—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
GBPCAD Daily Chart Analysis EP 1.7063SL 1.7166 (102 Pips)TP 1.6808 (255 Pips) 1:2.49 Mind your own risk as well!
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ခုန်ပေါက်ပြီး ပြန်လာလို့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ဝင်တိုက်မိတယ်။
ကောင်လေးက စာအုပ်တွေ တပွေ့တပိုက်ကြီး သယ်လာပြီး ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာတော့
ဂျွန်ကို မတွေ့မိတာလည်း ပါတယ်—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
CADJPY Daily Chart Analysis EP 32.33 SL 81.59 (74) TP 83.52 (118) 1.58 Mind your own risk as well !!
တစ်ခါက ဘဝမှာ အင်မတန် အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုကို ရယူလိုတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် ရှိသတဲ့။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ငွေကြေးစုဆောင်းတဲ့ အကျင့်ကို မွေးမြူခြင်း
ငွေကြေးပာာ သိပ်ပြီး အရေးပါပါတယ်။
ဒီငွေတွေနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့တတွေ အသက်ရှင် နေထိုင်စားသောက်နေကြတာပါ—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
EURJPY (Daily) 12-11-2019
EURJPY EP 120.44 SL 120.05 (39) TP 121.357 (90) 1:2.17
Total Website Visits: 306893